नेपाली काँग्रेस भन्ने पार्टीले नी आन्दोलन गर्ने रे त ! – Yug Aahwan Daily
नेपाली काँग्रेस भन्ने पार्टीले नी आन्दोलन गर्ने रे त !
युग संवाददाता । २८ मंसिर २०७७, आईतवार १०:११ मा प्रकाशित
नेपाली काँग्रेस भन्ने पार्टीले नी आन्दोलन गर्ने रे त ! जनतालाई दुख्ख पर्दा र औषधि उपचार नपाउँदा सरकार ग्वार्नु पर्ने बेलाँ उपर खुट्टि लाएर बस्ने । अब सरकारले जनता निम्ति केइ गर्न सक्दैन भनेर उर्दि गरी सकेछि फेरि के खान आन्दोलन गर्ने होइछ कुन्नि ? एक पटक कमिनिष्टलाई सरकाराँ पुर्याएर सारै पश्चाताप गर्या नेपाली जनतालाई काँग्रेस ले नि यो पटक जे जस्तो व्यवहार गर्याे, त्यसलाई सम्झेर नेपाली जनता दिक्क भा छन् । हुन पनि न त सदन, न त सडक । कतैबाट नि सरकारलाई खबरदारी गर्नै नसक्या काँग्रेस ले यो कोरोरोनाको बेलाँ आन्दोलन गर्छु भनेर के गर्न खोज्या हो कुन्नी ? लाज नभा नकचरो पार्टी सभापतिले ओलीसित साँठगाँठ गरेर संवैधानिक पद बाँडेर खा छन् । त्यसैले सर्वदलिय बैठकाँ गा सभापति जस्तो मान्छे बैठकाँ केइ नबोलेर भागेर आए भनेर ऐले गाम्भरी चर्चा छ ।
विपक्षी दलको नेता भएर नि ओलीका अगाडि मुखाँट वाफ नफालेर आ मान्छे फेरि केको आन्दोलन भन्दै हिँड्या हो कुन्नी ? सायद यो आन्दोलन जनता हितका लागि नभएर आफ्नै पार्टीका नेता खाँतिर नी हुन सक्छ । किन त भन्दा सरकारका पुलिसले पार्टीका नेता रामचन्द्रलाई तनहुवाँ लछारपछार गरे भन्थे । त्यस्सकै विरुद्ध नी हुनसक्छ । प्रजातन्त्राँ जनता लागिभन्दा नी आफ्ना नेताका लागि लड्ने पार्टी महान नै मानिन्छ होला । त्यसैले करिव तीन बर्षे कार्यकालाँ ओली सरकारले गर्या ज्यादतीविरुद्ध जनताले कति आवाज उठाए उठाए । तर कैले देशाँ विपक्षी दल भएको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् । तर जब पन्चहरु राजाको पक्षलेर सडकाँ उत्रँदैछन्, तब काँग्रेस पनि आँफूलाई सडकाँ लैजाने घोषणा गर्दैछ । यो बेला जनताले राम्रैसित देखाइदे हुन्थ्यो । यौटा जाबो पुल उदघाटन गर्न जाँदानी नेता लखट्ने पार्टी र संवैधानिक नियुक्तियाँ भागवण्डा लाएर बाँडेर खाने यस्ता पार्टीलाई देश जिम्मा लाएर नि के को जनता उँभो लाग्दा हुन के !
सरकार चलाउनेले सरकार चलाउन् । नजान्ने र विपक्षी दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्ने भएछि विचरा जनता हाताँनी पाँच बर्ष पर्खिनेबाहेक के काम भो र ? आफ्ना नेता स्वार्थमात्रै हेर्ने । अनि जनता जति भाँडमे जाए भन्ने यस्ता नेताहरको हालीमुहाली भएछि त्यस्तो पार्टीलाई जनताले भोट पनि कसरी हालुन् के । यी दलबाट जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ कतै देख्खिएन के ! आफ्नै दलभित्र लडेर कैल्यै नथाक्ने काँग्रेसीहरको माझाँ चुनाउका बेला सत्ताँजान बाँडिचुँडि खाने तमसुक गरेर सत्ताँ गा कमिनिष्टहरुसमेत तिनै वर्षाँ पदको लुछाचुँडि गरेर काँग्रेसीहरले जस्तै बोली बाराबार र कुटाकुट गरेछि अब जनतानी दिक्क भैसके ! जल्लाई भोट हालेनी देश बनाउलान् भन्नुको सट्टा कार्यकर्ता बनाउन मात्रै थालेछि कसको विश्वास मान्ने होर ? त्यसैले पन्चहरले राजा आउ भनेर बोलाउँदै छन् क्यारे । उनै आउँछन् शासन गर्छन् । त्यसपछि त भोट हाल्न नि नपर्ने होला टन्टै साफ हैन्त । प्रजातन्त्रका नामाँ यस्ता भ्रष्ट नेताहरलाई पाल्नभन्दा त बरु भोटै नहाल्ने व्यवस्था आएनी के भो र ?